दिउसै लाल्टिन बाल्दै युवाको नारा : संसद बिघटनको कुन हो धारा ? (भिडियो सहित) Global TV Nepal
दिउसै लाल्टिन बाल्दै युवाको नारा : संसद बिघटनको कुन हो धारा ? (भिडियो सहित)
संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै अनेरास्ववियूले काठमाडौंमा लालटिन जुलुस निकालेको छ । जुलुसमा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई, अनेरास्ववियू सहसंयोजक रञ्जित तामाङलगायत सहभागी छन् ।
‘दिउँसै लालटिन बाल्दा पनि संविधानमा संसद विघटनको धारा भेटिएन’ लेखिएको कालो ब्यानरसहित प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा रहेका अनेरास्ववियू नेता–कार्यकर्ताहरुले लालटिन जुलुस निकालेका हुन् । उनीहरुले ‘दिउँसै लालटिन बाल्यौं है, संसद विघटनको धारा ख्वै’, ‘हामी अरु जान्दैनौं, प्रतिनिधिसभा विघटन मान्दैनौं’ भन्दै चर्का नारा पनि लगाएका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकामा लालटिन बालेर जुलुस प्रदर्शन गरिए पनि काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जिल्लाहरुमा लालटिन, सिटी वा लाठी जुलुस निकालेर विरोध प्रदर्शन गरिएको अनेरास्ववियूले जनाएको छ ।
मंगलबार बसेको अनेरास्ववियूको बैठकले संसद विघटनविरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । मंगलबार मन्त्रीहरुलाई कालो झण्डा देखाउने र सबै कलेजहरुमा कालो ब्यानर राख्ने काम गरेको अनेरास्ववियूले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला जलाउने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिलको दिशातर्फ अग्रसर हुनु साझा दायित्व हो: राष्ट्रपति
दुइ साताको संवादहीनता तोड्दै प्रचण्ड बालुवाटारमा, दुई अध्यक्षबीच सहमतिको प्रयास
फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीले छानबिन समितिलाई दिए बयान
४० लाख रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा झडप, केही विद्यार्थी घाइते, उपकुलपतिको गाडी तोडफोड